Ndiani Boss alum Danny Pintauro ane basa idzva sevheti tech - Nhau
'Ndiani Bhosi' alum Danny Pintauro ane basa rakanaka rinopa mubayiro
Kune vateveri vazhinji vetsika dzepop, aimbove nyeredzi yemwana Danny Pintauro anogara achirohwa musoro Jonathan Bower kubva kune anodiwa '80s sitcom' Ndiani Boss? ' kana mudiki Tad Trenton anobva 'Cujo.'
Asi mazuva ano - anopfuura makumi maviri emakore abva kuHollywood - Danny, ane makore makumi mana nematatu, muchengeti ane rudo kune vamwe vevagari vemuCentral Texas vanotambura: mhuka dzayo dzisina pekugara.
adriana lima uye metin hara
Pakutanga mwedzi uno, Danny akaenda ku Instagram kuti vateveri vazive kuti iye zvino ave kushanda sechiremba wezvipfuyo uye wemishonga kuasina purofiti Austin Pets Alive!
Bob D'Amico / ABC Mufananidzo Archives / Getty Mifananidzo
'Soooooooo, ndinogona pakupedzisira kuzivisa kukwidziridzwa kwangu kubasa! Ini zvino ndave pamutemo Vet Technician / Pharmacy Technician pano paAPA, 'Danny akagovana pa Instagram padivi pe mufananidzo iye pachake mumakwenzi ake. 'Zuva rechitatu rekudzidziswa - post spay / neuter kuvhiya kupora tekinoroji. #austinpetsalive. '
Soooooooo, ndinogona pakupedzisira kuzivisa kukwidziridzwa kwangu pabasa! Ini zvino ndave pamutemo Vet Technician / Pharmacy Technologist pano kuAPA. Zuva rechitatu rekudzidziswa - post spay / neuter kuvhiya kupora tekinoroji. #austinpetsalive
Chinyorwa chakagovaniswa na Danny Pintauro (@dannypintauro) pana Apr 17, 2019 pa8: 52 am PDT
Musi waApril 5, akagovana slideshow yemifananidzo pa Instagram aine grey katsi uye akatsanangura zvaanga achiita mumakore mashoma apfuura achikurudzira vateveri kuti vatore chikamu. 'Saka ndafunga kuti ndinokuzadza zvishoma pane zvandanga ndichiita gore rapfuura nehafu uye pamwe ndotanga kutumira mimwe mifananidzo yemhuka dzakanaka dzandinoshanda nadzo. Izvo zvinotarisira zvinounza iwe ruzivo rwese, mufaro, uye pamwe moyo wakavhurika wekupa kune yedu basa, 'iye akanyora .
'Ini ndinoshandira sangano hombe rakadaidzwa Austin Zvipfuwo Zviripo! (APA!) Isu hatisi KILL KILL yemhuka uye isu takabatsira Austin, Texas kuve YAKAKURUKURA HAPANA Kuuraya MUNYIKA! Tinoita izvi nekupayona mapurogiramu akazara uye matsva akagadzirirwa kuchengetedza mhuka dziri panjodzi yekuuraya, kunyanya kubva kuAustin City Shelter. Taunza AAC ku99% HAPANA KURE, 'akaenderera mberi.
Hei munhu wese !!! Nguva yakareba kwete kutaura! Saka ndafunga kuti ndinokuzadza zvishoma pane zvandanga ndichiita gore rapfuura nehafu uye pamwe ndotanga kutumira mimwe mifananidzo yemhuka dzakanaka dzandinoshanda nadzo. Izvo netariro zvinokuunzira ruzivo rwese, mufaro, uye pamwe moyo wakavhurika wekupa kune yedu chikonzero. Ini ndinoshandira sangano rakakura rinonzi Austin Pets Alive! (APA!) Isu hatisi KILL KILL yemhuka uye isu takabatsira Austin, Texas kuve YAKAKURUKURA HAPANA Kuuraya MUNYIKA! Tinoita izvi nekupayona mapurogiramu akazara uye matsva akagadzirirwa kuchengetedza mhuka dziri panjodzi yekuuraya, kunyanya kubva kuAustin City Shelter. Taunza AAC ku99% HAPANA KURE. Ini ndinonzi Cat Care Specialist, izvi zvinoreva kuti chero katsi iyo APA! inotora mune iyo ine imwe mhando yekurapa kana yehunhu nyaya inotanga kupfuura neyedu Isolate Units kutanga. Mune iwo mauniti, timu diki yevanhu, kusanganisira ini, ipa katsi zvese zvavanoda kuti vawane zvirinani - zvinonwiwa zvine mvura, majekiseni, kudya kaviri pazuva, mishonga yemarudzi ese, mabhati, kutaura kwedundira, uye rudo. Mumatanho edu mana ekuzviparadzanisa, isu tinobata zvese kubva kumakwara kusvika kuvhunika mapfupa, calicivirus, FIV, URIs, FeLV, nhengo dzemuviri dzakarasika uye runyorwa rwunoenderera mberi. Isu tinogashira katsi dzese dzinoda kuve nehunhu hunowanikwa kuti vasarudze kwavachaenda kubva kuIO. Mune zvimwe zviitiko zvinoreva kunzvimbo yekurerwa uye mune zvimwe zviitiko zvinoreva kumatura uko kwavachagamuchirwa sekatsi dzinoshanda mumapurazi kana kumarinda. Pamazuva mazhinji iri basa rakaenzana kwandiri kupa imwe nhanho yekutarisirwa kune imwe nzvimbo pakati pemakumi matanhatu- makumi manomwe katsi! https://www.austinpetsalive.org/ KUTI upe kune dhipatimendi rekati: https://www.austinpetsalive.org/donate/wishlist #adoptdontshop #austinpetsalive
Chinyorwa chakagovaniswa na Danny Pintauro (@dannypintauro) pana Apr 5, 2019 pa11: 24 am PDT
'Ini ndinonzi Cat Care Specialist, izvi zvinoreva kuti chero kati iyo APA! inotora mune iyo ine imwe mhando yekurapa kana yehunhu nyaya inotanga kupfuura neyedu Isolate Units kutanga. Mune iwo mauniti, timu diki yevanhu, kusanganisira ini, ipa katsi zvese zvavanoda kuti vawane zvirinani - zvinonwiwa zvine mvura, majekiseni, kudya kaviri pazuva, mishonga yemarudzi ese, mabhati, kutaura kwedundira, uye rudo.
'Mumatanho edu mana ekuzviparadzanisa, isu tinobata zvese kubva kumakwara kusvika kuvhunika mapfupa, calicivirus, FIV, URIs, FeLV, nhengo dzemuviri dzakarasika uye runyorwa rwunoenderera mberi. Isu tinogashira katsi dzese dzinoda kuongororwa hunhu kuti dzione kwadzichaenda kubva kuIO. Mune zvimwe zviitiko zvinoreva kunzvimbo yekurerwa uye mune zvimwe zviitiko zvinoreva kumatura uko kwavachagamuchirwa sekatsi dzinoshanda mumapurazi kana kumarinda.
'Pamazuva mazhinji basa iri rinoreva kuti ini ndinopa imwe nhanho yekutarisira kune imwe nzvimbo pakati pematsi makumi matanhatu-70!' akagumisa. Akakurudzirawo vateveri vake kuti vatore pane kutenga zvipfuyo zvavo uye akawedzera chinongedzo kuhungwaru hwepakati. 'KUDZIDZA kudhipatimendi rekati: https://www.austinpetsalive.org/donate/wishlist #adoptdontshop.'
blac chyna kurasikirwa nehurongwa
Danny, uyo akapedza kudzidza kuStanford University muma '90s uye mumakore achangopfuura aigara nekushanda muLas Vegas, akambove mutengesi weTupperware uye maneja weresitorendi. Muna 2014, akaroora Wil Tabares.
Muna 2015, Danny akazarurira Oprah Winfrey izvo ane HIV uye akaonekwa muna 2003. 'Zvandinoda kuti nharaunda yangu izive ndeyekuti tinofanirwa kuzvitarisira isu,' akaudza Oprah panguva yekugara kwavo pasi.
Katy Perry naRobert Pattinson vakaona 'vachiita' kuresitorendi yeLos Angeles
Mwanasikana waDuane Chapman anonzwika pamusikana wake mutsva
ndiani mya akaroora
nicholas hoult mutambo wezvigaro
honey boo mai vaamai manje
vane makore mangani mick jagger vazukuru
mwanasikana waheidi klum ane chisimbiso
lara spencer anga aripi pa gma